トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Win sei Hanemono-Dejihane (zvinhu road)
Recent nepachinko, sezvo Seven muchina rava musoro, ndinofunga kuti kupinda kunyange vaya vasingazivi kuchinzi Hanemono. Vamwe vaya vanoziva, Hanemono kuva zvishoma payout, zvingava vamwe vanhu vanofunga kuti hazvina kukwanisa kukunda.
Zvisinei, kana uchiziva kuti chikamu kuziva kuti uyewo kuhwina Hanemono, unogona achiri kukunda anobuda.
Chokutanga, uye ipapo rondedzero Hanemono. The Hanemono, kana bhora anopinda imwe pena kune imwe nzvimbo, achavhura pamapapiro chimiro chinhu kumeso bwepuranga centre. Vamwe unhu chinhu,-gomba matatu yakazaruka, kuva guru raparadza zvinosimbisa kana bhora unopinda pakati pavo achava Hanemono.
ichangopfuura, asi ndiye Hanemono zviri hazvichaonekwi nyore, kana pane chinhu kana sezvakaita iri takunda sei, ndinoda kuona. Hanemono chinhu vangangoora kukanganiswa zvipikiri kugadziridzwa kupfuura vanomwe muchina. Kana Ndinofunga takunda muna
Hanemono, panodikanwa kutarira chipikiri kuchinja. Kamwe ndakaenda zvinopesana, Kana uri munhu chipikiri kugadziridzwa, mukana kuhwina kupfuura vanomwe muchina zvinogona kunzi kwirirei. Zvino, isu achasuma nzvimbo ezvipikiri kugadziridzwa uchida kuona kuti akunde.
Chokutanga, ndiye chipikiri kuchinja pedyo rinokosha kutanga chucker. Pedyo pakutanga ,: mativi ndiko, vaya yakazaruka iri chokwadi kunobatsira. Izvi zvakasikirwa iri nyaya mbambo zvakanaka pedyo pakutanga chucker yakazaruka, asi mumwe, kuti sezvo wakakosha sezvo pedyo kutanga, ndiye mbambo kuchinja zviri chikamu rinonzi hakama kwenzira pakutanga nezvipikiri.
chipikiri ichi, akatarira kumusoro, sezvo mukaha pakati pakutanga chucker, zvichava nyore kuti ane bhora. Kana uri chipikiri kuchinja zvikamu anonzi hakama, ndiko kuti kunyange zvazvo akasungirirwa kutanga zvishoma zvikuru, kazhinji kupinda kutanga. Ndinofunga
zvishoma payout pamutsipa, ndive vamwe vanhu kuti kudziviswa, asi kana zvichienzaniswa Zvinomwe muchina, zvichiita nyore kuti varove nani Hanemono. Kuderera inivhesitimendi In guru, kutamba plugging kure, nekuti pachiyero akatsiga nyore, zvishoma nezvishoma payout kupfuura kutenda ari kuwedzera.
kubatwa chakagadzirwa zvipikiri kugadziridzwa, kamwe vagere patafura chipikiri kugadziridzwa zvakanaka, izvozvo chete anorova pashure. Kana akaisa ari kutanga, kana kuisa nokurova kuvhura mapapiro, nokuti bhora kunze iye anogona kuhwina, uye michina Seven zvinodzorwa zvose purogiramu, ndinofunga kunonakidza uye zvakasiyana zvinogona kuravidza.
pane imwe nguva, yakawanda payout ndini hazvigoni kutarisirwa, sokuvapo kutamba zuva rimwe, ndinofunga kuti ndiwane zvishoma refu. Life of Hanemono ari chipikiri kuchinja. Kana Ndinorangarira izvozvo chete, nguva achatora zvishoma, inoti nyore kuhwina muenzaniso akaenzanisa Seven muchina.
ichangopfuura, ndingadai havaoni zvakawanda, pane zviri Mafuro nepachinko parlors kuti makasimbisa yakawanda, yakadai sokuti anoshandiswa tafura. Kunyange vaya kunzvengwa, pfungwa kuhwina, nekuti chete chipikiri kugadziridzwa, edza kutamba kamwe nemitoo yose.